एनआइसी एसियाको सेयर लिलामीमा, लिलामी भर्ने मिति असार १ देखि ८ गतेसम्म
ARCHIVE, MARKET WATCH » एनआइसी एसियाको सेयर लिलामीमा, लिलामी भर्ने मिति असार १ देखि ८ गतेसम्म
काठमाडौं - एनआइसी एसिया बैंकले सर्वसाधारण समूहको २ लाख ९८ हजार ५३६ कित्ता सेयर लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ ।असार १ देखि ८ गते भित्रमा लिमाली भर्न आवेदन दिनुपर्नेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ वा त्यो भन्दा बढी भाउ तोकी बोलपत्र फारम भर्नुपर्नेछ । बोलपत्र फारम बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यापिटल बबरमहल, काठमाडौंमा पुग्नेगरी पेस गर्नुपर्नेछ । एनआइसी एसियाले गत चैत १६ देखि वैशाख १९ गतेसम्म १५% हकप्रद निष्कासन गर्दा नबिकेको सर्वसाधारण समूहको सेयर अहिले लिलामीमा बिक्री गर्न लागेको हो ।
लिलामीको बोलपत्र असार ९ गते दिउँसो १ः३० बजे एनआइसी एसिया क्यापिटल बबरमहलमा खोलिनेछ । एनआइसी एसिया बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ अर्ब १३ करोड ८४ लाख एक हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । तस्रो त्रैमासमा बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३५ करोड ७९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एनआइसीको प्रतिसेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ६ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १४५ रुपैयाँ ५० पैसा छ ।
प्रकाशित मिति : Thursday, June 8, 2017
प्रकाशको मृत्युको खबर सुनेर सीता दाहाल अर्ध-बेहोस, प्रचण्ड नर्भिक पुग्दै !
ललितपुर अदालत भित्रै महिला कर्मचारीसँग यौन सम्बन्ध राखेको भिडियो सिसिटिभीमा कैद
प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाल रहेनन्, हृदयघातका कारण नर्भिक अस्पतालमा निधन
अशुभको अचम्मको संयोग : १३ दिन अघि आफ्नो तस्विर ब्ल्याक एण्ड व्ह्वाइट बनाएका थिए प्रकाशले !
नविल बैंकलाई ५ करोड जरिवाना, यसरी लुकाइएको थियो, नविल बैंकको व्याज काण्ड !